Warqad bixisa qaabka gaarka ah ee astaanta xoolaha | Abuurista khadka tooska ah
Astaamaha xayawaanka yar yar oo leh qaab jirkooda u gaar ah
Astaantu dhibaato weyn ayey ku noqon kartaa sidaa darteed ka fiirso sawirka ee shirkad ama summad. Sababtaas awgeed, ma sahlana in la helo hal-abuurro garanaya sida si wanaagsan loogu qeexo waxa uu rabo macmiilku, sidaa darteed kuwa ku takhasusay xirfadda weyn waxay badiyaa leeyihiin qiime sare. Waxa kale oo muhiim ah in macmiilku ogyahay waxa ay rabaan, maxaa yeelay macluumaadka badan ee ay bixiyaan, way fududaanaysaa in dib loo abuuro astaantaas oo runtii matasha wax soo saarkooda ama summaddooda.
Naqshadeeye naqshadeeye Hindi ah oo la yiraahdo Shibu PG isticmaal taabasho aad u qaas ah in lagu daro wax run ahaantii asalka u ah astaamaha. Ereyga xayawaanka la sheegayo ayaa lagu qeexay oo tan ayaa loo adeegsadaa warqad qeexaysa qaabka gaarka ah ee dabeecadda xayawaankaas. Saamaynta la gaadhay runtii waa mid soo jiidasho leh sida aad ku arki karto tusaalooyinka kala duwan ee aan khadadkaas kula wadaagayo taas oo dhiirrigelin u noqonaysa astaamo kale.
Shibi wuxuu wax ka beddelaa hal xaraf oo ah ereyga "dibi" u isticmaal sida ay iyagu yihiin geesaha laftooda xayawaankaas astaanta u ah. Hab aad u qaas ah oo lagu xoojiyo qaabka xayawaanka ay astaanta lafteedu u tahay wax aan ka ahayn eray. Isla taas ayaa loo wareejin karaa qaabab kale sida dad caan ah ama dhir gaar ah oo dabeecad wanaagsan leh oo lagu qeexi karo hal xaraf.
Marka sidoo kale way cadahay taas isha ayaa door weyn ka ciyaareysa qaabeynta astaanta lafteeda si ay ula jaanqaado xarafkaas oo aan siin doonno qaab gaar ah oo qabanaya macnaha erayga laftiisa.
Waad ku joogsan kartaa Behance inuu ogaado shaqadiisa. Haddii aad rabto naqshadeeye kale adoo taabanaya astaamaha aad ku dhaafayso gelitaankan inaad la kulanto Ji Lee, ma niyad jabi doontid.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Astaamaha xayawaanka yar yar oo leh qaab jirkooda u gaar ah
Patreon, oo ah barxadda masruufka loogu talagalay fannaaniinta
David Bowie sawiradiisa